Miiltoo fi Keebar: Obbolaa lamaan qabxii olaanaan yuunivarsitii Ameerikaa galan - BBC News Afaan Oromoo
Miiltoo fi Keebar: Obbolaa lamaan qabxii olaanaan yuunivarsitii Ameerikaa galan
Image copyright Dr Mosisa Galataa
Goodayyaa suuraa Keebar, Miiltoo fi Naahilii bitaa gara mirgaatti sirna eebbaa Miiltoo Moosisa kutaa 12 xumuru.
''Ani mana maatii koo irraa ka'ee hangan mana barumsaa gahutti guyyaa sadii deemeen barachaa ture. Har'a ijoollee koo yuunivarsiitii addunyaa irraa tokkoffaa jedhamu keessatti arguun gammachuukoo xumuraati,'' jedu Dr. Moosisaa Galataa Aagaa.
Dr. Moosisaan abbaa ijoollee sadii yoo tahan, Ameerikaa kutaa Alaabaamaa keessa jiraatu.
Keebar, Miiltoo fi Nahilii maqaa ijoollee isaaniiti. Keebarii fi Miiltoon mana barumsaa isaanirraa qabxii olaanaa fiduun ture yuunivarsiitii kan dhaqqaban.
Obbolaan lamaan Keebarii fi Miiltoon har'a biyya Ameerikaatti yuunivarsiitii barnoota saayinsiifi Injiinariingiin beekamaa ta'e Inistitiyuutii Teeknoolojii Maasachuseetis (MIT - Massachusetts Institute of Technology) galuun barachaa akka jiran Dr. Moosisaan BBC'tti himaniiru.
Keebar barataa 'Environmental Engineering' tiin waggaa sadaffaadha.
Miiltoon ammoo akkuma kutaa 12 xumureen yuunivarsiitota gurguddoo jedhaman saddet irratti carraa 'scholarship'tiif dorgomee, yuunivarsiitoota saddet irraattuu fudhatama argate.
Haa ta'u malee innis bakka obbolessi isaa itti barataa jiru MIT filachuun amma Saayinsii Kompiitaraa barachaa jira.
Dr. Moosisaan mataan isaanii yuunivarsiitii Finfinneetti barnoota herregaa barsiisaa turan.
Bara 2000 ammoo carraa barnootaa PhD Herregaan argachuun gara Ameerikaa deemanii waggoota jahaaf barataa erga turanii booda hojii argatanii achumatti hafan.
Bara 1992 A.L.A namoota sadii yeroo jalqabaaf kitaaba barnoota Herregaa Afaan Oromootiin qopheessan keessaa isaan tokko akka ta'an BBC'tti himaniiru.
''Dabalataan kitaaba barnoota herregaa leenjii barsiisotaa jalqabaas kan qopheesse ana'' jedhu.
Wayita ammaas Yuunivarsitii Obornitti gargaaraa pirofeesaraa fi barsiisaa herregaati.
Obbolaan kun lamaan hayyummaa abba irraa dhaalaanii nama jechisiisa. Dr. Moosisaan garuu carraaqqiidha jedha.
''Anii fi haati manaa koo xiyyeeffannoon keenya jalqabaa ijoollee keenyaafi. Barnoota isaaniin akka dorgomtoota ta'aaniif carraaqaa turre" jedhan.
Biyya Ameerikaatti kan ijoollee gowwoomsee barnoota irraa fageessu, tapha viidiyoo, sagantaalee bashannanaa televizhinii garaa garaa fi wantoota akka kubbaa fa'i jedhu Dr Moosisaan.
Kanaafu mana saaniitti televizhiniin kan eeyyamamuufi banamu yeroo barnootni hin jirre Jimaata galgalaa, Sambataa fi Dilbata sa'aatii muraasaaf akka ture himu.
Kanarraa kan hafee yeroo barumsi jiru tasumaa ilaaluun hin danda'amu jedhan.
Kana malees, beekamtii isaanii malee bakka barbaadan akka hin deemne dubbatu Dr. Moosisaan.
Kana biraa ammoo barattoota ciccimoo waan tahaniif baruumsa isaanii sadarkaa jalqabaa fi sadarkaa lamaffaa mana barnootaa lafa barattoonni muraasni qofti dorgomuun itti fudhataman Magnetik jedhamutti baratan jedhan.
''Ofiikootiif akka nama tokkootti xaaree jiraadheera garuu ijoolleen koo sadarkaa kanarra gahuu isaanii caalaa waanti na gammachiisee beeku hin jiru, hin jiraatus.''
Ani yoon barataa ture mana barumsaa sadarkaa lamaffaa guyyaa sadii natti fudhata ture. Ammas ijoolle kiyyaa yoon guddisu haalan keessa dabarse kana hundaa itti himaan gorsaa guddise kan jedhan Dr Mosisaan.
''Isaan ammoo bakkan ani gahe caalaa sadarkaa guddaa irra gahuu akka qaban itti himaan ture,'' jedhu.
Miiltoo Moosisaa hoo maal jedha?
Image copyright Dr Mosisa Galata Aagaa
Goodayyaa suuraa Miiltoo Moosisaa
''Osoon barnoota sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa barataa turetii qabee bakka guddaa gahuuf baay'een carraaqaa ture."
"Hojiiwwan kalaqaa garaagaraa irrattis hirmaataan ture. Namootni baay'eenis na dinqisiifataa, hojiikoos ilaalaa turan,'' jeechuun attamiin durumaa kaaseee keessa isaatti kaka'umsi akka umame hima.
Tattaaffii kanaanis milkaa'uun carraa yuunivarsiitii guddaa Ameerikaa keessatti argamu galuu irra dhaqqabuunsaa akka isa gammachise BBC'tti himeera.
''Obboleessikoo hangafti yunivarsiitii barataa jiru deeggarsa guddaa naaf taasisa. Akkasumas milkaa'ina keenya keessatti maatiin keenya shoora olaanaa qabu,'' jedha Miiltoon.
Haa ta'u malee, tattaaffiin dhunfaa barataa tokkoo milkaa'inasa isaa egereetiif murteessaa ta'us hin dhoksisne.
Obboleessa isaa Keebar Moosisaa waliin yuunivarsiitii tokko galuu isaa ilaalchisee gammachuu guddaan qaba jedhee anaaf gaaddisa kooti jedha.
Sanyummaa fi dorgommii manneetii barnootaa
Yeroo sadarkaa tokkoffaa baratus ta'e sadarkaa lammaffaatti gurraacha ta'usaatiin qofaa dhiibbaan garaagaraa irra gahaa akka ture dubbata Miiltoon.
Ta'us garuu kunis barnoota isaarraa hangas isa gufachiisuu akka hin dandeenye hima.
''Ofitti boonuun barbaachisaadha, anis gurraacha tahuu kootti nan boona.''
Barattootni Afrikaa irraa gara Ameerikaa deemaniifi lammiilee Ameerikaa gurraachoti ofitti amanuun dorgomtoota ciccimoo tahuun bakka barbaadan gahuu danda'us jedha.
Miiltoon yeroodhuma sadarkaa lammaffaa ture irraa keessee kompitera irratti xiyyeeffachuu kan jalqabe ta'usaafi wantoota kalaqaan walqaban caalaa akka jaalatu BBC'tti hime.
Keessumaa sagantaalee kompiitaraa uumuu [programming] fi diizaayinii weebsayitiiwaanii irratti hojjechuu akka jaalatu hime.
Fuuldurattis kaampanota gurguddoo teeknoloojii addunyaa kan akka Appilii fi kaan keessa sagantaa kalaqa fi dizaayinoota garagaraan hojjechuu akka barbadu hima.
Ijooleen isaanii guyyaa tokko ogummaa amma barataa jiraniin biyya isaanii akka ta'aajialaniif abdii akka qaban dubbatu Dr. Moosisaan.
Gumaata Kaampaasii 15: "Nama murteessuun isa dhibuuf yuuniversitiin qormaata"